Sajhasabal.com | Homeमहिलाले यस्ता पुरुषसंग यौनसम्पर्कमा रुची राख्छन् ! जानी राखौ
महिला र पुरुषवीच हुने सेक्स सम्वन्ध वारे अनेकौं अनुसन्धान भएका छन् र ती अनुसन्धानले धेरै निष्कर्ष निकालेका पनि छ ।
बिहे गर्नु अगाडि युवतीलाई सोध्नुपर्ने महत्वपुर्ण ५ प्रश्नहरु जानी राखौ
सुत्दा ब्रा–पेन्टी खोलेर सुत्नुपर्ने ७ करणहरु यस्ता छन् !
केही हुँदैन, झन् रमाइलो हुन्छ भन्दै यो समयमा सेक्स गर्नुहुन्छ ! केहि समस्या त हुँदैन ?
यस्ता सात कुराबाट थाहा पाउन सकिन्छ युवतीले गरेको यौन संकेत
मैले विवाहपूर्व नै पटकपटक यौन सम्पर्क राखिसकेको छु, तर विवाहपछि श्रीमानले...